New Relic yakabatanidza Pixie kuKubernetes kugadzirisa kusimudzira kweichi | Linux Vakapindwa muropa
Panguva yemusangano wepamhepo RamangwanaStack 2021 iyo yaipembererwa mazuva mashoma apfuura, New Relic yakazivisa kuti iri kusanganisa chikuva chako chekucherechedza Pixie open source ye Kubernetes neiyo New Relic One chikuva.
Nayo New Relic iri kusimbisa chigadzirwa chayo iine ruzivo "rweKubernetes" nyowani iyo yainoti ichaita kuti iratidzike nekukurumidza musoftware container orchestration system pasina kuda kuvandudza chero kodhi kana sampuro data kutanga. Iyo kambani yakazivisawo kugadzirisa kune yayo yekutevera bug, kutarisa network, uye kuronga kugona, mukuwedzera kune maviri mavhezheni matsva epuratifomu yayo akatarisana nenharaunda.
Kune avo vasingazive neNew Relic, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi ikambani iyo inotengesa DevOps uye ekushandisa ekushandisa maturusi iyo inobatsira vanogadzira kuti vaone matambudziko nekushandisa kwavo software. Icho chakatsaurirwa kupa basa rekutarisa yezvishandiso zvinomhanya munguva chaiyo, kubatsira zvikwata zveDevOps kuti vanzwisise zvizere chero nyaya dzinogona kukanganisa mashandiro esoftware.
Pixie inozvarwa Kubernetes cluster yekucherechedza dhizaini iyo kambani yakawana gore rapfuura payakatenga Pixie Labs.Kuwanikwa uku kwaive chikamu chekutanga kuita microservices-based application pasina kuda kuti masangano eIT aite software yemumiriri yega yega.
Mukuru wekambani uye muvambi, Lew Cirne, akarondedzera mashandiro ePixie mune blog blog panguva iyoyo:
“Nechirevo chimwe cheCLI, vagadziri vanogona kuona metric dzese, zviitiko, matanda, uye maratidziro ekushandisa kwavo. Tekinoroji yaPixie inobvisa kudiwa kwekuwedzera kodhi yemidziyo, kumisikidza ad hoc dhibhodhi, kana kufambisa dhata kunze kwesumbu, ichiponesa vagadziri nguva yakakosha kuti vatarise pakuvaka software iri nani. Skip kodhi shanduko uye tora ipapo Kubernetes kucherechedzwa «.
Iyo New Relic Imwe chikuva inozivikanwa, Asi kambani yakatambura kuti iwane purofiti. Kunge makambani mazhinji eetekinoroji, yaendesa bhizinesi rayo kure nekutengesa marezinesi esoftware kune modhi yekunyorera, uye gore rapfuura rakazivisa mutengo wakakura kugadzirisa zvigadzirwa zvaro kuyedza kupfuurira kusiyanisa kukosha kwayo. Izvo zvakaonekwa sekudikanwa kwekutungamira nekambani manejimendi, sezvo musika wekutarisa urikurumidza kuve wakawandisa nevanhu vanokwikwidza zvipo.
Pasinei nematambudziko ako ese, New Relic yaenderera mberi nekutarisa pakupa iri nani vatengi ruzivo Uye chiitiko chako chitsva cheKubernetes chinomiririra michero yeaya maitiro. Iko kugona kutsva kunowanikwa mune beta vhezheni kutanga nhasi, inofambiswa neAuto-Telemetry naPixie, tekinoroji iyo kambani yakaisa maoko pairi payakatangisa yekutanga inonzi Pixie Labs Inc. muna Zvita.
Iko Kukosha Kunobatsira kwePixie Labs Technology es kugona kwako kutora data rinoshanda kubva Kubernetes, iri rakavhurika sosi software inoshandiswa kuongorora midziyo yesoftware inovaka zvigadzirwa zvemazuva ano, pasina kunyora chero imwe kodhi. Izvi zvinochengetera vanogadzira nguva, kunyanya mumabasa makuru emabhizimusi software uko makumi kana mazana ezvikamu angangoda kuitiswa.
"Kumisikidza chikumbiro kuti upe iyo telemetry data yaunoda yaive nzira yekunyora," Zain Asgar, Pixie co-founder uye iye zvino Pixie general mutevedzeri wemutungamiri uye maneja mukuru kuNew Relic, akaudza SiliconANGLE. "Zvinosanganisira shanduko zhinji dzekodhi uye zvinogona kutora vhiki, kana isiri mwedzi, kuti uone kukosha. Kunyangwe kungochengetwa kwechiridzwa ichi kwaive mutoro mukuru kuzvikwata ”.
Pixie anogadzirisa izvi nekushandisa Linux kernel tekinoroji inonzi Yakawedzerwa Berkeley Packet Firita. Iyo eBPF inoshanda nekutora ruzivo rwakadzama nezve izvo zviri kuitika mukati mekushandisa neveraging network traffic, pasina kuchinja chero kodhi mukati mekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » New Relic yakabatanidza Pixie kuenda Kubernetes kugadzirisa kuvonekwa kweichi
Webhusaiti kuparara. Ndezvipi zvirimo zvekutumira network